Taariikhda My Butros » Sidee Man A ee Ayuub wuxuu muujin karaa qofku shakhsiyadiisu Romantic
Okay, si aad u ogaato sida falaga ayaa la isticmaalo da 'in lagu cabiro shakhsiyada sifooyin iyo saadaalin biyihu ku saleysan in lays meerayaasha?
... Matalan marka aad dhalatay iyo haddii aad tahay "calaamad biyo" ama "calaamad qorraxda?"
Well, Waxaan la horumariyo nidaam la mid ah oo ku saleysan gig nin ee.
Taasi waa xaq: line of shaqada uu astaan ​​u noqon kartaa in ama aan ka laba idinka mid Doono "shaqada" ee saaxadda shukaansi iyo weheshiga ee.
In kasta oo nidaamka ma laga yaabaa in aad u "scientific,"Ansax salka ku daawashada ballaaran, hadalqaaday, fasiraadda, waraysiyo iyo waqti la dhowr beerta diiwaan "jiirka."
Haddii aad rabto in aad qaadato qaar ka mid ah shaqada malee ka soo kuwaas oo si guul ah ku xidhaysaa mafaatiix leh, ee natiijooyinka waaraya, akhriska iyo digtoon.
Qorayaasha iyo gabayaaga (Nooca artsy)
Shakhsiyaadka Kuwaan waxa ay noqon idealistic, taataabtay, iyo ka mid ahaanshaha. Waxay u arkaan muraayad deeq ah sida kala badh buuxo. Waxay inta badan tahay conversationalist weyn, oo fiican in laydhka la joognaa leh. Waxay tahay version lab ama Guryaha Saaxiibahiin fiican. Laakiin dad iska jira: kuwaas "jinni oo lacag la'aan ah" mararka qaarkood waxay noqon karaan kuwo ay ka go'antahay difficulties iyo baaba'aan.
Haddii aad shukaansi macallin ah, guuraan madaxa fasalka.
In kasta oo ay jiraan qaar ka reeban xeerka, Dad ku baro waa caadi ahaan nooca, bukaanka, wanaagsan la xoolaha iyo carruurta, oo ay tahay "daraasad degdeg ah." Add to this xaqiiqada ah in ay weyn tahay multi-taskers la celcelis ahaan xirfadaha sababaynta kor ku xusan.
XISAABIYEYAASHA IYO CRUNCHERS LAMBARADA
Ragga in this category inta badan waa nooca muxaafidka ah. Waxaad "tiri" karaa Gabisay kuwaas oo la janjeedha faahfaahsan, habsaamaan, pinchers iyo lacag iyo weliba. Waxay leeyihiin heerarka ba'an. Haddii aad tahay galay hami ah, Toosan-xadhko, nooca wax ku ool ah, waxaad halkan ka heli doontaa farxad.
BOOLISKA, Dabdamiska, IYO KAL-LAB
Maxaa gabdhaha ma jecli in aan lagu "badbaadiyey?"Guys ee beeraha ayaa la ogyahay inay noqon geesi, ilaaliya, oo awood leh, iyo daryeelka. Oo miyaan xuso ay inta badan tahay xaalad wanaagsan jirka? Inta badan yihiin dad aad u janjeedha, oo dareen sharaf iyo masuuliyad.
Waxaad ka heli doontaa in ay noqdaan wada-hawlgalayaasha "siman" in xiriirka.
Waxaad riix doontaa leh oo waxmatarayaal ah, haddii aad tahay macquul ah, wargeliyo, habacsan, iyo mushkilad wanaagsan; ay aad u tahay.
Oo Joogto bilaa shaqada ah
Aan ay wajahayaan, aynu wada ognahay ama ay ku taariikhaysan qof in this category.
Isaga oo "shaqo", aanuna sida baradhada Gogol.
Halkan script ah.
Waxa uu weli isku dayaysa in "isaga qudhiisu ka helayo." Ama had iyo jeer waa hoos uu nasiib. Or ayaa weli isku dayaysa inay ku baaqaan in riyo noqoto xiddig dhagax weyn ah uu ugu soddon. Right? Haddii ay sidaas tahay, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ka fiirsan fursadaha aad iyo "warqada pink" isaga ugu dhaqsaha badan.
Qoorta BULUUG VS. Qoorta WHITE–Arrinta fiican?
Go'aamada, go'aamo. Waa maxay gabar ay sameeyaan?
Ma fiican in taariikh nin qoorta buluug ama cutie ah qoorta cad?
Well, waxa ay ku xiran.
Halkan ka 4-1-1.
Guys qoorta Blue inta badan dhulka ku soo degay yihiin oo wanaagsan la gacmahooda. Waxay tahay sida caadiga ah ay fududahay in la noqon, la diiday in baaritaan. Isu eego, ay guud ahaan ka badan dib u dhigeen,.
Guys White collar marar badan ay leeyihiin weyn ka iman kara shaqeystaan, waxa ay noqon cerebral, oo waa mushkilad weyn.
In kastoo kuwaas aysan ahayn xeerar adag oo degdeg ah, waxaad ka heli doontaa iyaga lagu dabaqi karo xaalado badan oo shukaansi. Wax kasta oo aad sameyn, doortaan si caqli ah.
Ka dib dhan, Jacaylku waa wax muhiim "ganacsiga."